NFC yeApple ichave ichiwanikwa kune vanogadzira | IPhone nhau
NFC yeApple ichave ichiwanikwa kune vanogadzira
Apple yanga ichishandisa NFC mumaPhones ayo kwenguva yakati, asi zvave zvisati zvave kusvika izvozvi kuti vanogadzira application vawane mukana weiyi tekinoroji. Kunyanya isu tiri kutaura nezvazvo inonzi Core NFC, iyo inobvumira vanogadzira kuti vashandise mumashandisirwo avo kubva kuIOS 11 zvichikwira.
Izvi zvinoreva kuti iPhones inozokwanisa "kuona ma tag eNFC uye kuverenga mameseji ane data re NDEF." NDEF iyo inouya kuva (NFC Data Exchange Fomati) rejista inogamuchirwa pasi rese kuita mashandiro ayo anosanganisira kuverenga kana kurekodha kweNFC. Saka isu takatarisana nepanorama nyowani yeNFC yeiyo iPhone, iyo Vachakwanisa kushandisa tekinoroji iyi kupfuura zvavari kuita nhasi, iyo inonyanya kubhadhara kuburikidza neApple Pay.
Chokwadi isu tese tinoziva zvinoitwa neNFC, asi muchidimbu kune avo vasingazive ndiyo tekinoroji iyo inobvumira mushandisi kubatana pakati pemidziyo miviri zvisina waya nekuburitsa chiratidzo, uye panguva imwechete iyo inogona zvakare kugamuchira chiratidzo kana zvese zvishandiso zviri padyo padyo pasina kudikanwa kwekubatana. Tiri kuenda kuti chimwe chinhu chakafanana neBluetooth asi iine shanduko dzakakosha senge isingade simba, inokurumidza uye yakachipa pane kuitiswa kweBluetooth uye zvakare yakachengeteka nekuti inofanirwa kunge iri pamasendimita makumi maviri kuti ikwanise kubatanidza , Kudzivirira kusabatana kwekuzvipira.
Iko mashandiro pasina mubvunzo akakura uye hazvisi pachena kuti iyi tekinoroji ichavhurwa zvakadii mu iPhone, asi iro dambudziko chairo mukati memashoko akanaka nderekuti el NFC yakabva ku iPhone 6 kuenda kuzvishandiso zvazvino zvinosanganisira Apple Watch, asi iyo Core NFC inongopindirana neiyo nyowani iPhone 7 uye 7 iPhone Plus. Tine chokwadi chekuti kuenderana uku kuchakura mukati memavhiki mukuwedzera pakuve anowirirana mune anotevera Apple zvishandiso senge runyerekupe rwe iPhone 8, iPhone 7s uye 7s Plus, mamwe mamodheru pamberi peaya anogona kuwana kuenderana. Iwe uchafanirwa kuve wakangwarira kuti uone zvinoitika pakupedzisira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » NFC yeApple ichave ichiwanikwa kune vanogadzira
Nekudaro, mabhanga ane yavo NFC chikwama paApple, senge BBVA Wallet, inogona kubuda muIOS 11 uye kukwanisa kushandisa yedu iPhone / Apple wachi kuita kubhadhara nemakadhi edu? Apple yekuchengeta maitiro asi akajairika ebhangi rega rega? Kana icho chikamu chinenge chichiri kukwanisa kumanikidza mabhangi kutevedzera Apple Pay. Shuwiro yakanakisa.
Mashandisiro eICloud Keychain pane iPhone
Iyo iOS 11 Mifananidzo app inozopedzisira yaziva maGIF semifananidzo yemifananidzo